သက်ဝေ: ကမ္ဘာ့ဖလား မှတ်တမ်း
Posted by သက်ဝေ at 4:40 PM
ဇွန်မိုးစက် July 13, 2010 at 5:13 PM
ထင်တော့ထင်သား... အစ်မသက်ဝေ ကမ္ဘာ့ဖလားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နိဂုံးပို့စ်လေး ရေးဦးမှာပါလို့။း))
နောက်လေးနှစ်လည်း ဖဘသုံးဖြစ်သေးရင် ပျော်ပျော်ပါးပါး အတူတကွ အားပေးကြမယ်နော်။
ကိုအောင်(ပျူနိုင်ငံ) July 13, 2010 at 6:05 PM
အမ ဂျာမဏီအသင်းကို တော်တော်မုန်းတာပဲ၊ ကျနော်က ဂျာမန်အသင်း
ကို ၈၆၊ ၉၀ လောက် ကတည်းက စပြီး သဘောကျတာ၊ ယူရို
၂၀၁၂ ကျရင် ထပ်ပြီး ပျော်ပျော်ပါးပါး အားပေးကြမယ်လေ အမ။
kaungkinpyar July 13, 2010 at 6:06 PM
ပြန်လည် ဆုံတွေ့မယ် နော်...း)
mae July 13, 2010 at 6:45 PM
မမသက်ဝေလိုပဲ ရှုံးမယ့်အသင်းမှ အားပေးမိသော လူများထဲမှာ အနော်ထိပ်ဆုံးက
spain လေးကျမှ နိုင်တော့တယ်.. spain နိုင်တာ တကယ်ဝမ်းသာတယ်
ညီမလေး July 13, 2010 at 6:51 PM
အော်... မမသက်ဝေက ကန်သူမသိတဲ့ အချစ်များအကြောင်း တကယ်ရေးတာပါလား <3
ကလူသစ် July 13, 2010 at 7:16 PM
“မမသက်ဝေက ဂျာမဏီကို မှန်းတယ်တဲ့လား” မုန်းပါနဲ့အေ။ ငယ်ငယ်ချောချောလေးတွေ..... အဲ့....ဘောကန်ကောင်းပါတယ် :P
မောင် လေး July 13, 2010 at 7:44 PM
အစ်မသက်ဝေရေ...ဂျာမနီ ကို အင်္ဂလန်ရှုံးသွားပြီးကတည်း ကြည့်လိုကိုမရတော့တာ....
အင်္ဂလန်ကို အားပေးရတာကိုက အကုသိုလ် များလှပါတယ် အစ်မရယ်...။
သက်ဝေ July 13, 2010 at 7:47 PM
ဇွန်... ကိုအောင်ပြောသွားသလိုပဲ ၂၀၁၄ မတိုင်ခင် ၂၀၁၂ မှာ ယူရိုပွဲတွေ အတူတူ ကြည့်ကြအုံးမယ်လေ... ကမ္ဘာ မပျက်သေးရင်ပေါ့လေ... အဟိ
ကိုအောင်... ဘာကြောင့်မှန်းမသိ အသားလွတ် မုန်းမိတာပါ... သူတို့တွေ တော်တယ်ဆိုတာတော့ လက်ခံပါတယ်... တော်ပြီး Proud ဖြစ်နေလို့ကြည့်မရတာ ဖြစ်လောက်တယ်...။ ၂၀၁၂ ကိုအောင်ပြောမှ သတိရတယ်...။ ကျေးဇူး...
ပြာပြာ... တွေ့ကြမယ်...း))
မေ... နေ့တိုင်း မျက်နှာစာအုပ်မှာ တွေ့နေကျမို့ ထူးပြီး ပြောနေစရာလိုမယ်မထင်... အတူတူပဲလေ... နော့်...
ညီမလေး... ရေးချင်ဇောနဲ့ ကိုယ့်လက်ကို ကိုယ့်ဖာသာ ပြန်ခလုတ်တိုက်ရင်း ကန်သူမသိတဲ့ အချစ် ဆိုတဲ့ စာလုံး မေ့ကျန်သွားတယ်။ ညီမလေးပြောမှ ပြန်ထည့်လိုက်ရတယ်...။
ကျေးဇူး ကျေးဇူး...း))
ကလူသစ်... ဟွန်းနော်... ဟွန်း... ဟွန်း... ဒါပဲ ပြောမယ်...။
အကုသိုလ်ကတော့ တကယ်ကို ရှယ် များတာကလား...း))
မောင်မျိုး July 13, 2010 at 9:20 PM
ကျနော်လည်း ကိုမောင်လေး ပြောသလိုပဲ အင်္ဂလန်အသင်းလည်း မြန်မာ အသင်းနဲ့ သိပ်မကွာတော့ဘူး ခုတော့ သူများပြောတာ ခံရပြီးး( ။
ဖြူ July 13, 2010 at 10:18 PM
ထင်တယ်... ဘော်လုံးပွဲပြီးသွားရင် သက်ဝေဆီက တခုခုတော့ ဖတ်ရမှာပဲလို့။ အပျော်တွေ အတူ ကူးစက်ခံစားသွားတယ်။
ကို ကို စန်း July 13, 2010 at 10:45 PM
သက်ဝေဆိုလို. အရင်က ယောကျာင်္းကြီး မှတ်နေတာ ဒီနေ.ကွန်.မန်.တွေ ဖတ်ကြည့်မှ အမျိုးသမီးကြီး ဖြစ်နေတယ် (ငယ်သလား ၊ ကြီးသလား သေသေချာချာမသိပါ ) ၊ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်တွေးမိတာက ဘလော့ဂါတွေ တော်တော်များများကို သေသေချာချာ မသိတာတော့ အမှန်ပဲ
အမကြီး လို. ခေါ်လိုက်တော့ ကိုယ်ငယ်သွားတာပေါ့
အမကြီး ကျန်းမာရွှင်လန်းပါစေ ၊
pandora July 13, 2010 at 11:57 PM
တချိန်က Euro ပွဲတစ်ခု ထင်ပါတယ်။ ဂျာမနီနဲ့ ချက် နဲ့ ကန်တာ ချက်ကို နိုင်ငံလေးမို့ အနိုင်ကျင့်တယ်လို့ ခံစားရကတည်းက ဂျာမနီကို မုန်းသလိုဖြစ်သွားခဲ့တာ။ ချက် ဂိုးသမားလေးကို ရင်ဘတ်ကို တွန်းလိုက်ကြတာ။
အရင်က ဂျာမနီ ဂိုးသမား Lehmann ကိုလည်း အမြင်ကတ်မိတယ်။ စတိုင်ရော မျက်နှာပေးရော။ သူ့ကိုတော့ အာစင်နယ်မှာ တွေ့တွေ့နေကတည်းက ဆိုပါတော့။ သူကတကယ်တော့ တော်ပါတယ်။ တခါကတော့ သူဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကောင်းဆုံးဂိုးသမားဆိုပြီး သူ့ကိုယ်သူ ကြုံးဝါးခဲ့သေးတယ် တဲ့။ အဲဒါနဲ့ ပိုအမြင်ကတ်သွားတယ်။ အခုတော့ အနားယူသွားပါပြီ။
အဲလို အကြောင်းလေးတွေနဲ့ ဂျာမဏီကို အားမပေးခဲ့တာ။ တကယ်တော့လည်း အစွဲအလန်းတွေပါ။ အဓိပ္ပါယ် သိပ်မရှိလည်း ခက်သားလေ။း)
စပိန်ဖြစ်ဖြစ် ဟော်လန်ဖြစ်ဖြစ် ဖလားရသွားတာ ၀မ်းသာပါတယ်။ နောက်ဆုံးနေ့မှာတော့ ဟော်လန်ကို အားနည်းတယ်ထင်လို့ အားပေးလိုက်တယ်။း)
MrDBA July 14, 2010 at 12:16 AM
ကန်ကြဦးမယ်လေ ပျော်ပျော်ပါးပါးပေါ့ ..:)
potato July 14, 2010 at 1:35 AM
တကယ်ကို အကြိုက်ချင်းတူတယ်... ဟုတ်ပ Germany ကိုတော့ လုံးဝကို မုန်းတာ.. eng, brazil, arg support တာလည်းတူတူပဲ... Holland ထက်စာရင် Spain ကိုနိုင်စေချင်တာ လည်းတူတယ်... ဒီ post 1 ခုလုံးက ကိုယ့်ကိုရေးပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲ...
P.S. အမြဲဖတ်ဖြစ်ပေမယ့် comment မထားခဲ့မိဘူး.. အခုကတူလွန်းလို့ပါ... (:
ကိုအောင်(ပျူနိုင်ငံ) July 14, 2010 at 8:12 AM
အမ မသက်ဝေနဲ့ မပန်ဒိုရာတို့ ရေးထားတာ ဖတ်ပြီး ကော်မန့်
ထပ်ရေးချင်လို့ ထပ်ရေးခွင့်ပြုပါ အမ ...
ဂျာမန်ဘောလုံးသမားတွေ မာနကြီးတယ်ဆိုတာ ကျနော့်အနေနဲ့
မငြင်းပါဘူး။ သို့ပေမယ့် သူတို့ရဲ့ မာနဟာ သာမန်လူသားတစ်ဦး
မှာ ရှိနေကြ ပြုမှုနေကြပါ။ အားကစားပွဲအတွင်း ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်
ဖြစ်လောက်အောင် ချိုးဖောက်ခဲ့မှုတွေမှာ ဂျာမန်ဘောလုံးသမားတွေ
ဟာ ပြင်သစ်၊ အီတလီ၊ အင်္ဂလန်တို့ထက် အဆများစွာ နည်းပါ
တယ်။ လက်ရှိ ချန်ပီယန် စပိန်အသင်းဟာလည်း တချိန်က အကျင့်
သိပ်မကောင်းတဲ့ ဥရောပ ဘောလုံးအသင်း တစ်ခုပါ။ ဖီဖာရဲ့ မှတ်
တမ်းဟောင်းတွေ ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၀၆ မတိုင်ခင်က
ပြင်သစ်နဲ့ ဂျာမန် ချစ်ကြည်ရေး ပွဲတစ်ခုမှာ ပြင်သစ်ဘောလုံး
သမားတွေရဲ့ အကျင့်ဆိုးဝါးစွာ ယုတ်မာခဲ့မှုကြောင့် ဂျာမန်အသင်း
က “ဒိုင်စလာ”ဆိုတဲ့ ကွင်းလယ်သမား ခြေထောက်ကျိုးပြီး
ကမ္ဘာ့ဖလားနဲ့ ဝေးကွားခဲ့ရပါတယ်။ မန်ချက်စတာမှာ လက်ရှိ
ကစားနေတဲ့ ပေါစခိုးလ် လက်ချက်နဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလား မတိုင်ခင်
ယူရိုချန်ပီယန် မတိုင်ခင် ထိခိုက် ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ အားကစား
သမားတွေ အများကြီး ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ယူရို ၉၆ တုန်းက
အင်္ဂလန် နောက်တန်းနဲ့ အလယ်တန်းသမားတွေ ညှပ်ပြီး
ခြေထောက် ရိုက်ချိုးခဲ့လို့ ဂျာမန်ဘောလုံးသမား မားသီယပ်
စမ်းမားဟာ ဒူးခေါင်းရိုး ကျိုးပြီး အားကစားသမားဘ၀က
ဖြစ်နေကြ အလွန်အကျွံ ဆိုးဝါးမှု မှတ်တမ်းတွေမှာ ဂျာမန်
ဘောလုံးသမားတွေဟာ ဥရောပရှိ တခြားဘောလုံးသမား
တွေလောက် ဆိုးဆိုးဝါးဝါး မရှိဘူးလို့ ကျနော်တော့ ထင်
အမတို့ နှစ်ယောက်နဲ့ အငြင်းအခုန် လုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး၊
ကျနော် သိသလောက် ထပ်ပြီး တင်ပြတာပါ။
Hmoo July 14, 2010 at 10:21 AM
'ဘောလုံးပွဲကို မျက်နှာစာအုပ်နှင့် အတူတူ ကြည့်ရှုအားပေးသူများအနက် အများစု (အများစု) မှာ မိန်းကလေးများ ဖြစ်ကြသည်။ ယောင်္ကျားလေးတွေ ဘယ်ဆီ ဘယ်ဝယ် ရောက်နေကြသည် မသိ…။ '
အမ ယောင်္ကျား အများစုက ဘောလုံးပွဲကြည့်ပါတယ်။ သူတို့ပြောတဲ့ စကားအများစုက ဟာ.. ငါ..ကွာ..
ဘာဖြစ်နေတာလဲ သွင်းပါတော့လား... အစရှိသည့် ဒေါမနသ သံများနှင့် စိတ်ကိုနှစ်ကာကြည့်ကြခြင်းဖြစ်သည်။
အမတို့လိုဖေ့စ်ဘုတ်မှ ကြည့်သူများသည် ဖေ့ဘုတ်တဖက် ကြည့်တချက် မကြည့်တချက် စားလိုက် ပြောလိုက် လုပ်နေသည်မှာ ဘောပွဲကြည့်နေသည်မဟုတ်ပါ။ (ကျနော်ကတော့ အထက်ကအတိုင်းကြည့်ပါတယ်ဖေ့ဘုတ်လဲမဝင်နိုင်ပါ တွစ်တာလဲမရှိပါ။ )
ဘောပွဲကြည့်တာ စိတ်နှစ်ပါသည်။ အစားအသောက်သည် အားလပ်ချိန်မှာစားခြင်းပါ။ ထို့ကြောင့် အမသည် ယောင်္ကျားများ ဖေ့စ်ဘုတ်တွင်ဝင်မဆွေးနွေးသည်ကို နားလည်သင့်သည်။ ပြောနေခြင်းထက် လက်တွေ့တကယ်သူတို့လုပ်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။
ဂျာမဏီကို ကျနော်ဆလိုက်ထိုးပီး လူချသည်ကို သိပ်ကြိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် ဂျာမဏီသည် ကျနော့် ဒုတိယ အကြိုက်အသင်းဖြစ်သည်။
ကျနော်လည်း ရေဘဝဲကို အမြင်ကတ်သည်။ သူ့နေရာ သူမနေ။ ပြုတ်ပီးနုတ်နုတ်စင်းပစ်ချင်သည်။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) July 14, 2010 at 11:48 AM
ကျွန်မကတော့ စပိန်ရဲ့ အမာခံပရိသတ်မို့ စပိန်နိုင်တော့ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ၀မ်းသာမိပါတယ်..
နောက်၎နှစ်ဆိုတာ အမြန်ရောက်လာရင်သိပ်ကောင်းမယ်လို့ ထင်မိတယ်.. အစ်မရော ဘယ်လိုထင်သလဲ ဟင်..း)
P.Ti July 14, 2010 at 12:12 PM
ပြီးသွားတော့ပြီးသွားတာပါပဲ.... Myatnoe ပြောတာ ထောက်ခံပါသည်။ ဘောလုံးပွဲကြည့်နေလျှင် ဘာမှမလုပ် သေချာစူးစိုက် အာရုံစိုက်ပါသည်။ ဖုန်းမှာရိုက်လိုက် ဘောပွဲကြည့်လိုက်ဆိုရင်တောင် အာရုံခံစားလို့မရလို့..
စုချစ် July 14, 2010 at 12:22 PM
အမား..သက်ဝေ... တဂ်လေး ရေးပြီးပါကြောင်းးးးးးးးးးးး
I think Ma Thet Wai wrote it for fun to her friends from Facebook. Why other people thinking in other way...?
I don't understand. Anyway, that is their choice.
Ma Thet Wai...
Thank you for your hilirous post. I like it.
And I always see your fun words & fun activities on Facebook. Keep it up.
သဒ္ဓါလှိုင်း July 14, 2010 at 1:14 PM
nu-san July 14, 2010 at 8:40 PM
မမသက်ဝေ..ကျနော်ကတော့ ကွန်ပျူတာဘေးချပြီး ဘောပွဲကြည့်တာ.. သူတို့ကန်တာ ကြည့်ပြီး အသည်းယားလာရင် ပြောစရာ လူမရှိတော့ ၀ါသနာတူ အမတွေ သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ FB မှာ ပြောတာ.. အဲဒါလည်း အရသာတစ်မျိုးနော်အမ.. World Cup 2010 ကတော့ ပျော်လည်း ပျော်တယ်.. စိတ်လည်း လှုပ်ရှားရတယ်.. ပြီးတော့ မမတို့နဲ့လည်း ပိုရင်းနှီးတယ်လို့ ခံစားရလို့ နောက် ၄ နှစ်မှာ လာတဲ့ World Cup ကျရင်လည်း အခုလိုပဲ အတူတူ အားပေးနိုင်ပါစေလို့ အမနဲ့ ထပ်တူ ဆုတောင်းတယ်နော်.. :D
ချစ်ကြည်အေး July 14, 2010 at 9:20 PM
အဲသလို ရင်မမောချင်လို့ အသင်းစွဲ သိတ်မထားတာဟ....ပွဲစကြည့်လို့ ခြေသာတယ် ကောင်းတယ် ထင်တဲ့အသင်းကို နိူင်စေချင်လိုက်တာပဲ၊ ဟော်လန်က လူချလို့ ရှုံးတာတောင် နဲသေး...။ စပိန် ဂိုလီဗာလေး ပီတိမျက်ရည်နဲ့ ငိုတော့ သူများမှာ ဝမ်းတွေ နဲလို့...အ ဟိ ဟိ...:P